Quantum စျေး - အွန်လိုင်း QAU ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Quantum (QAU)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Quantum (QAU) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Quantum ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $3 403 039.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Quantum တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Quantum များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
QuantumQAU သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.105QuantumQAU သို့ ယူရိုEUR€0.0886QuantumQAU သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0801QuantumQAU သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0954QuantumQAU သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.943QuantumQAU သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.66QuantumQAU သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč2.31QuantumQAU သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.39QuantumQAU သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.14QuantumQAU သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.146QuantumQAU သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$2.36QuantumQAU သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.815QuantumQAU သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.559QuantumQAU သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹7.87QuantumQAU သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.17.68QuantumQAU သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.144QuantumQAU သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.158QuantumQAU သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿3.26QuantumQAU သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.729QuantumQAU သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥11.1QuantumQAU သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩124.56QuantumQAU သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦40.61QuantumQAU သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽7.67QuantumQAU သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.91
QuantumQAU သို့ BitcoinBTC0.000009 QuantumQAU သို့ EthereumETH0.000264 QuantumQAU သို့ LitecoinLTC0.00178 QuantumQAU သို့ DigitalCashDASH0.00115 QuantumQAU သို့ MoneroXMR0.00118 QuantumQAU သို့ NxtNXT8.41 QuantumQAU သို့ Ethereum ClassicETC0.0143 QuantumQAU သို့ DogecoinDOGE29.04 QuantumQAU သို့ ZCashZEC0.00111 QuantumQAU သို့ BitsharesBTS3.98 QuantumQAU သို့ DigiByteDGB4.03 QuantumQAU သို့ RippleXRP0.346 QuantumQAU သို့ BitcoinDarkBTCD0.00358 QuantumQAU သို့ PeerCoinPPC0.356 QuantumQAU သို့ CraigsCoinCRAIG47.37 QuantumQAU သို့ BitstakeXBS4.43 QuantumQAU သို့ PayCoinXPY1.81 QuantumQAU သို့ ProsperCoinPRC13.04 QuantumQAU သို့ YbCoinYBC0.00006 QuantumQAU သို့ DarkKushDANK33.33 QuantumQAU သို့ GiveCoinGIVE225.01 QuantumQAU သို့ KoboCoinKOBO22.93 QuantumQAU သို့ DarkTokenDT0.0968 QuantumQAU သို့ CETUS CoinCETI300.01